Kudya kweMediterranean Chii uye zvinobatsira? | Nutri Diet
Chokwadi wakanzwa mamirioni enguva, taura kune zvinovaka muviri uye vanachiremba yenyika ino yemabhenefiti akawanda anayo Kudya kweMediterranean zvehutano nemuviri. Chikafu cheMedithera chakadzokera kumashure mazana emakore uye chiri nzira ine hutano kwazvo yekudyisa iyo maguta ese enzvimbo yeMediterranean anotevera.
Kune nyika dzakawanda dzinotevera rudzi urwu rwekudya: Spain, Italy, Cyprus, Greece kana Portugal. Zvino ini ndichakuudza zvishoma nezve chikafu ichi chine hutano kune muviri uye chausingakwanise kupotsa mukudya kwako kwezuva nezuva.
1 Hunhu hwekudya kweMediterranean
2 Mabhenefiti ekudya kweMediterranean
3 Matambudziko azvino ekudya kweMediterranean
4 Ngozi yekudya kweMediterranean ichinyangarika
Hunhu hwekudya kweMediterranean
Iko hakuna chikafu chimwe cheMediterranean, kune marudzi akawanda mumhando yekudya iyi nekuti nyika zhinji dzinotevedzera chikafu chemhando iyi. Nekudaro, kunyangwe paine misiyano uye peculiarities, chikafu cheMediterranean chine nhevedzano ye zvakajairika maficha uye kuti vanogoverana munyika dzose.
Chinhu chikuru mukudya kweMediterranean ndeye mafuta omuorivhi.
Kunwa kuri pakati nepakati panguva yekudya kwemasikati.
Zvokudya akapfuma faibha sezvinoitwa nemichero, miriwo uye nyemba. Masaradhi vanofanira kuvapo pakudya kwose. Zvakanakisisa kudya zvinenge 3 zvidimbu zvemichero pazuva uye kutora miriwo kaviri kana katatu pavhiki.
Kana zvasvika pakubika, tsanangudzo dzendiro zviri nyore uye zvakanyatsochenjerera.
Murudzi urwu rwekudya, pane kudyiwa kushoma kwezvokudya zvakapfuma muprotein, zvakadai senyama tsvuku. Pane zvinopesana, kana pane humwe huvepo hwe hove kana huku.
Zvakajairika kushandisa zvigadzirwa zvakadai onion uye garlic uye vashandise sehwaro mukugadzirira kwezvokudya zvakasiyana.
Pane kuravira kwakakosha kwe The citrus uye nekuda kwekunhuhwirira kweacidic sevhiniga kana ndimu, ese anoshandiswa zvakanyanya mwaka ndiro kufanana nemasaladhi.
Zvokudya zveMediterranean diet zvinowanzoperekedzwa ne girazi rewaini yeRioja.
Paunenge uchigadzira madhishi akasiyana uye mabikirwo, marudzi ese ezvigadzirwa zvitsva anowanzoshandiswa, senge muriwo, hove kana michero.
Kushandiswa kwe mupunga uye pasta Mumhando iyi yekudya inowanzokwira zvakanyanya, kunyanya kanenge katatu kana kane pavhiki.
Ndokusaka pachinzvimbo chekutaura nezvekudya kweMedithera chete, inofanirwa kuitwa nemazvo kupfuura hupenyu hweMeditera, sezvo inopfuura nzira yokuidya nayo iri nzira youpenyu ine nhevedzano yetsika dzinoshamisa zvikuru dzakadai se kurara mushure mekudya.
Mabhenefiti ekudya kweMediterranean
Kudya kweMediterranean kunopa mabhenefiti akawanda ehutanoKupfuura zvese, zvinobatsira kudzivirira chirwere chemoyo uye kudzivirira njodzi yekubatwa neimwe mhando yegomarara. Zvinoshamisa kuti, mabhenefiti aya ave achizivikanwa kwemakore mashoma, kunyanya zvaive muma60s zvichitevera chidzidzo chakaitwa neNetherlands.
Ongororo iyi yakaburitsa musiyano mukuru waivapo pakati pehuwandu hwevakafa nekuda kwe kubva kune zvirwere zvemoyo munyika dzakaita seUS nedzimwe nyika dzakaita seGreece. Musiyano uyu wakakonzerwa kurudzi rwechikafu uye mararamiro aitungamirirwa nenzanga imwe neimwe. Mushure mekudzidza uku, yakazivikanwa mabhenefiti akawanda kuti muviri une chikafu chinobva pakudya kweMediterranean.
Matambudziko azvino ekudya kweMediterranean
Iye zvino Kudya kweMediterranean haina kukosha kwemakore mashoma apfuura uye yakadzingwa neimwe mhando yekudya kushomeka uye kuderera kwehutano nokuda kwomuviri. Nguva refu yekushanda uye kubatanidzwa kwevakadzi mumusika wevashandi zvakatungamira kune sarudzo iri nani yerudzi rwe zvokudya zvinokurumidza. Iye zvino ndiyo kugovera kukuru uye cheni dzezvokudya izvo kutonga pamusika saka kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvezvigadzirwa zvekushandisa.
Zvinhu zvose izvi zvakakonzera Kudya kweMediterranean akadzingwa nekudya kweAnglo-Saxon uko kwakapfuma mukati mafuta emhuka uye zvakanyanya kuderera zvine hutano uye zvinobatsira kumuviri pane kudya kweMediterranean.
Ngozi yekudya kweMediterranean ichinyangarika
Pasinei nekuiswa mumakore achangopfuura munyika yedu yemhando yekudya kufanana neAnglo-Saxon zvichibva pakutsanangurwa kushoma kwekudya uye kuvepo kukuru kwemafuta emhando yemhuka, zvishoma nezvishoma panotanga kuvepo ruzivo muruzhinji rwevanhu nokuda kwekudya kunovaka muviri nemafuta mashoma anopa mabhenefiti akawanda kumuviri.
Vazhinji vezvekudya uye nyanzvi munyika yedu vanotaura kuti zvakakosha kutevedzera kudya kwakafanana neMediterranean kudzivirira zvirwere zvemwoyo zvinogona kuitika, nguva dzose vakabatana kukukura kwezuva nezuva kwekuita zvishoma kana kushanda kwemuviri. Nezvinhu zviviri izvi zviri nyore uye zviri nyore kutevedzera, nyanzvi dzinovimbisa izvozvo uremu hwomunhu huchakwana Uye hapazovi nematambudziko ekurema.
Ndicho chikonzero nei zvakakosha zvikuru kusimudzira pakati pehuwandu hwevanhu vechidiki, kuravira kwe chikafu chakanyanya kufanana seMediterranean zvichibva pazvokudya zvine utano semichero nemiriwo, izvo zvinovabatsira kurarama hupenyu hune hutano kubva kure mafuta akaipa chaizvo yemuviri.
Mumakore achangopfuura, mapoka ezvematongerwo enyika anomiririrwa muSeneti akasimbisa kukosha kwekusimudzira rudzi rwekudya seMediterranean zvakanyanya sezvinobvira nekuda kwe zvikomborero zvisingaverengeki zvinopa muviri. Nekuda kweichi chikonzero uye nekuda kwekuwedzera kubatanidzwa kwevatungamiriri veSpain nevezvenhau vakasiyana, hapana mhando yengozi ikozvino Kudya kweMediterranean inogona kunyangarika kubva mukudya kwevaSpanish.
Ipapo ini ndichakusiira vhidhiyo umo ivo vanotsanangurwa zvikomborero zvakawanda kuti kudya kweMediterranean kunopa muviri uye utano hwomunhu pachake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Kudya kweMediterranean
Rumwe ruzivo rusina kujairika nezvekofi
Idya zvekudya izvi husiku kurara zvirinani